“Jabuuti Diyaar Uma Ahan Inay Raacdo Waddadii Imaaraadka, Baxreyn Ama Suudaan…” Madaxweyne Geelle – somalilandtoday.com
Hoggamiyaha Dhawrka cisho uga hadhsan tahay ee Trump-ka Mareykanka wuxuu sii wadaa baadi goobkiisa aqoonsiga Israa’iil. Suudaan kadib, bartilmaameedka cusub ee Washington waa Jabuuti. Cadaadis ayuu ku saaray madaxweynaha Jabuuti si uu ula jaanqaado Israa’iil. Laakiin madaxweyne Geelle gabi ahaanba diyaar uma ahan inuu raaco waddadii Imaaraatka Carabta, Baxreyn ama Suudaan.
Ismaciil Cumar Geelle wuxuu ku yidhi wareysigiisa ” “Shuruudaha ma bisla” Kuma qanacsani dowladda Israa’iil maxaa yeelay waxay u diidaysaa Falastiiniyiinta xuquuqdooda lama-taabtaanka ah, Waxa kaliya ee aan weydiisaneyno Tel Aviv waa inaan u dhaqaaqdo dhanka nabada waxaana sameyn doonnaa markaa taas bedelkeeda Laakiin waxaan ka baqayaa in ayna waligeed sameyn doonin “.
Wax dhibaato ah kuma qabno Yuhuudda dad ahaan ama Israa’iil ahaan qaran ahaan. Qaar ka mid ah xitaa waxay u yimaadaan Jabuuti arrimo ganacsi iyaga oo wata Baasaboorkooda, muwaadiniinta reer Jabuuti-na waxay awoodeen inay u safraan Israel muddo hadda laga joogo 25 sano, ”ayuu yidhi madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, oo wareysi siinayay majaladda The Africa Report. Si kastaba ha noqotee, markii wax laga weydiiyay bal in dalkiisu raaci doono wadadii Baxrayn, Suudaan iyo Imaaraatka, isla markaana uu caadi ka dhigi doono xiriirka uu la leeyahay Israa’iil, wuxuu yiri “ma bislaan shurudaha”.